‘Nofinofy Kely Ho Lasa Fiovàna’, Hetsika Tsara Indrindran’ny Media Sosialy Any Oganda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2014 14:17 GMT
Ny mpamorona ny 40 Days Over 40 Smiles (Maherin'ny Tsiky 40 ao anatin'ny 40 andro), Esther Kalenzi, mitazona zazakely mandritra ny hetsika #BeSanta. Sary nahazoana alalana ny nampiasàna azy.
Ao Kampala no misy ny fikambanana 40 Days Over 40 Smiles Foundation, fikambanana mpanao asa soa tarihan'ireo tanora nivonona ny hanampy ireo ankizy madinika ary ireo vondron'olona marefo, mba afaka mahazo zavatra tsara, amin'ny fanampiana amin'ny fampianarana sy fanomezana fampianarana mitantana ho amin'ny fahavitàna samirery sy maharitra ny fiainany. Mampiasa ireo media sosialy ilay fikambanana mba ho sehatra hanaovana fanentanana ary hitadiavana vahaolana.
Nanomboka ny 27 Febroary 2012 ny 40 Days Over 40 Smiles, raha nanokatra pejy Facebook i Esther Kalenzi, ary avy eo nangataka ireo namany mba hanome izay zavatra hananany afaka homeny, sahala amin'ny sakafo, fitafiana, boky, kilalao, vola ary hiaraka aminy mandritra ny faran'ny herinandron'ny Pàka mba hitsinjara ireo entana sy hankalaza miaraka amin'ireo ankizy ao amin'ny toerana roa fitaizàna zaza kamboty.
Ny faran'ny herinandron'ny Pàka, nitsidika toerana roa fitaizàna zaza kamboty izy ireo ary niaraka nilalao tamin'ireo ankizy, nihinana, nandihy ary niravoravo. Namorona Tsiky mihoatra ny 40 isa izy ireo.
Vao haingana aho no niaraka tamin'i Esther Kalenzi mba hiresaka momba ny 40 Days Over 40 Smiles.
Tumusiime Patrick (TP): Afaka manome ny tena momba anao ve ianao?
Esther Kalenzi (EK): Vehivavy Ogande aho, izay liana sy maniry mafy ny fiovana ho amin'ny tsara eo anatin'ny vondrom-piarahamonina misy ahy. Mampiasa ny namako aho, ny traikefa ary ny tambajotra mba hisarihana Ogande maro, indrindra ireo tanora ho amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina izay iainany.
TP: Niseho tany anaty filazam-baovao tao an-toerana sy maneran-tany ny 40 Days Over 40 Smiles. Azafady, mba zarao aminay hoe momba ny inona moa io ary nahoana ilay anarana hoe “40 Days Over 40 Smiles” no noraisina?
EK: Ambohipihaonan'ireo tanora mampiasa ireo hetsika mahafinaritra sy ny media sosialy io, mba hanangonana vola entina hanampiana ireo ankizy marefo.
Fikambanana voarakitra ara-dalàna io, nianga fotsiny sahala amin'ny nofinofiko mba ‘ho fiovàna’ iriako ho hita.
Niforona nandritra ilay fotoanan'ny fizaràna tamin'ny taona 2012 ilay anarana (40 andro fifadian-kanina), fony nanokatra vondrona tao amin'ny facebook aho, ary nandrisika ireo namana sy fianakaviana mba hanome fitaovana ho an'ireo tsy manana ary tsy afaka manana fianakaviana mandritra ny Pàka. Ny dikan'ilay hoe tsiky mihoatra ny 40 dia ankizy miisa 40 no mihoatra no nokasaiko. Tamin'io faran'ny herinandron'ny Pàka io, nitsidika ary nizara zavatra taminà ankizy miisa 150 izahay.
TP: Ny taona lasa teo, nisandratra ho hetsika tsara indrindra ety anaty media sosialy ao Oganda ny “40 Days Over 40 Smiles”, nihoatra ireo orinasa hafa toy ny MTN sy Airtel, izay orinasan-tserasera sangany ao Oganda. Ahoana no nahavitanareo izany?
EK: Ahoana no nahavitanay nanao izany? Tsy fantatro mihitsy. Nosafidian'ny olona izahay dia nandresy! Mieritreritra aho hoe ny zavatra mampiavaka anay dia izahay tsy mivarotra zavatra hahazoana tombony, mandeha amin'ny fikasàna hanampy ny hafa izahay. Tsy nitsitsy nampiasa ny fotoananay, ny hery ary ny fanananay izahay tao amin'io. Tsy nieritreritra ny ho afaka handresy ireo anarana fanta-daza ireo izahay saingy heveriko hoe mety tena nanao zavatra tsara izahay.
TP: Betsaka ny làlana ahafahana manangona vola ho anà asa soa, fa mampiasa manokana ny media sosialy ny 40 Days Over 40 Smiles mba hanangonana vola. Nahoana ianareo no nisafidy io hevitra iray io?
EK: Araka ny voalazako teo aloha, nanomboka tamin'ny vondrona tao amin'ny Facebook ilay fikambanana ary nety tsara izany. Nieritreritra aho hoe tokony manohy amin'io fomba mety tsara sy mandresy io izahay. Fanampin'izany, mora kokoa io, manakaiky ny vondrona kendrenay izay ireo tanora, ary mora hidirana ihany koa io.
TP: Tamin'ireo hetsika amin'ny media sosialy rehetra, anisan'ireo nihodina tokoa ny 40 days Over 40 Smiles nandritra izay roa taona izay, iza tamin'ny hetsikareo no tena nahitàna fahombiazana indrindra, ary nahoana?
EK: Tsy azo lavina fa ny #BuyABrick. Nahangona vola mitentina 8.000.000 shillings ogande (3.024 dolara Amerikana) izahay tao anatin'ny 10 andro raha nanangona vola hanamboarana toerana fatoriana. Nanao asa tsara ireo ekipa, nanana lamin'asa lehibe notanterahinay izahay ary mazava ho azy fa nanototra anay ny fanohanan'ireo mpisera tao amin'ny tontolon'ny Aterineto.
TP: Ahoana ny handaminanao ny zavatra ataonao ao amin'ny media sosialinao manokana ary ireo an'ny 40 days over 40 smiles?
EK: Hmm, fanontaniana sarotsarotra ihany izany. Ny tena marina, ny tena andaniako fotoana ao amin'ny media sosialy dia rehefa manentana olona amin'ny antony iray inoako fa afaka tanterahana aho; na io ho an'ny 40-40, na zavatra atao ho an'ny homamiadana na ny tantaranà vehivavy iray izay nandresy na dia teo aza ny sakantsakana rehetra.
TP: Mba lazalazao hoe azafady ny dingana lalovanareo mba hampandehanana ny hetsika media sosialy iray, ohatra hoe ny hetsika ‘Buy a Brick’(mividiana biriky).
EK: Ny Buy a brick, ohatra, dia nampieritreritra anay ny hoe inona ny zavatra kely indrindra amin'ny fanorenana. Marina fa misy ireo zavatra kely indrindra noho ny biriky, kanefa mora ny mampiseho ny tiana hahatongavana amin'izay. Raha vao nanana an'izay izahay, nanao ilay tenifototra izahay ary nifanakalo hevitra mikasika ny fomba hanatanterahana izany amin'ny fampiasàna ireo fitaovana eo an-tànana.
Tsy afaka hilaza izahay hoe tompon'andraikitra tamin'ny fahombiazana rehetra, satria nahazo fanohanana maro tsy araky ny noeritreretinay akory izahay.
TP: Mieritreritra ve ianao fa toy fitaovana fototra entina manosika ho ny fiarahamonina ho amin'ny tsara kokoa no fahitàn'ireo Ogande sy Afrikana ny media sosialy ?
EK: Eny. Porofo mivaingana izao izahay fa mandaitra izany, ary hitohy hiasa hatrany.
TP: Maro ireo media sosialy tsy naharitra iray taona ary tsy nahitana vokany. Ahoana no nahafahan'ny 40 Days Over 40 Smiles mbola niaina nandritra ny roa taona izao?
EK: Raha ny marina dia tototr'izy ity izahay. Mino mafy aho fa noho ireo ekipa tena manokan-tena amin'io ananako ary ao amin'io zahay satria tena liana sy mifantoka amin'ny anton'ilay fanampiana. Tsy nitady halaza izahay ary avy eo hiala, mbola eto foana izahay, ary na dia (mba tsy asian'Andriamanitra anie izany) olona iray mahatoky monja aza sisa no mpanohana anay.
TP: Inona avy ireo fanamby natrehanao tamin'ny fampiasana ny media sosialy ho fitaovana entina manangona vola ho an'ny 40 Days Over 40 Smiles?
EK: Tsy ‘milaza ny tena marina’ matetika ny media sosialy. Misy ireo olona mety mody miseho ho tia hanampy anefa rehefa tena zohiana, entina ‘hampisehoana’ fotsiny izany fa manana olona manaraka izy ireo, izay te-hoderaderaina.
Fanampin'izany, miha reraka ireo mpanaraka, indraindray, misintaka ny maro ary tsy hiraharaha intsony ireo olona ireo raha tsy hoe mahita tombony ho azy.
TP: Mieritreritra ny hanitatra ilay fanentanana 40 Days Over 40 Smiles tety anaty media sosialy handeha lavitra hihoatra ny sehatry ny media sosialy ampiasainao ankehitriny ve ianao?
EK: Eny, eo an-dalam-panaovana izany mihitsy izao izahay. Mahita ny filàna lalandava ny famoronana sy ny tokony hahaizana manao ny zavatra rehetra izahay. Te-hahazo olona maro araka izay tratra izahay, anefa mialoha izany, mila azy ireo ho tonga saina izahay hoe tsy tetikasa vonjy tavan'andro io; fa fomba fiaina.
TP: Misy olona manokana ve hoe alainao tàhaka sy manome fandrisihana anao rehefa manao ilay hetsiky ny 40 Days Over 40 Smiles ianao?
EK: Misy ireo mpitondra maro amin'izao fotoanantsika izao sy teo alohan'izao fotoanantsika izao, izay tsy nitsahatra nanaraka ny nofinofiny ary niezaka naka fanohanana, na dia tsy hevitra nalaza be aza izany. Tonga ao an'eritreritra i Mahatma Ghandi sy i Nelson Mandela.
TP: Inona ny torohevitra tianao homena ireo olona avy amin'izany, izay mety te-hanao zavatra mitovitovy amin'ny ataon'ny 40 Days Over Smiles tahàka izao?
EK: Tiako tokoa raha maro araka izay azo atao ireo olona manaraka ny nofiny, indrindra ireo tanora. Manana fahafahana amin'izany i Oganda ary mila atao araka izay tratra ny fampiasana ireo vahoaka tanorakelintsika ireo.
Tsy voatery hoe tena mitovy amin'ny zavatra ataon'ny 40-40 amin'izao izany, fa tiako raha misintona hevitra avy amin'ireo olona nitondra zavatra tsara sy ireo mpanonofinofy isika, mety hoe taokanto izany, mozika na zavatra hafa. Mila fotsiny manomboka ry zareo. Toy ny hoe tsy ho afaka atao izany io matetika raha tsy efa atao, saingy rehefa mino ny tenanao ianao ary mikiry hatrany, ho hitanao ho lasa mitera-bokatra tanteraka izany.